ပင်လယ်ရေကူးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်း ကောင်းကျိုးများ~ - LODGGY
Home » advantages • Beach • Ngapali • Ngwe Saung » ပင်လယ်ရေကူးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်း ကောင်းကျိုးများ~
မကြာခင် ခရီးတွေသွားကြတော့မယ်ဆို ဘယ် Destination တွေကို သွားဖို့ရွေးချယ်ပြီးသွားကြပြီလဲ? ဘုရားတွေဖူးမှာလား? တောင်ပေါ်တက်မှာလား? ပင်လယ်ကြီးဆီသွားမှာလား? ဒီတစ်ခေါက် Lodggy က ခရီးသွားခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးချိတ်ဆက်ပြီး ပင်လယ်ရေကူးမယ်၊ ပင်လယ်ရေကိုထိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိမလည်းဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
photo credit to @e.rewerenda
-ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်းနှင့် ပင်လယ်ထဲရေကူးခြင်းတို့က အသားအရေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပင်လယ်ရေထဲမှာ မက်ကနီစီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ ကယ်ဆီယမ်၊ ကလိုရင်း ၊ ဆာလဖိတ် တို့လို သဘောဝဓာတ်တွေပါဝင်တာမို့ Skin Care လိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ Stress ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပျက်စီးမှုတွေ၊ နှင်းခူနှင့် အခြား အသားအရေရောဂါတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
photo credit to @marcusnphot
-ပင်လယ်ရေအေးမှာရေကူးခြင်း ထိတွေ့ခြင်းက ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ Antioxidant တွေကို ထိန်းညှိ့ပေးပြီး ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပင်လယ်ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်စင်များနှင့် အဏုဇီဝသက်ရှိဟာ ဘတ်တီးရီးယားများနှင့် ဇီဝဆေးများအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီး အသားအရေရဲ့အညစ်အကြေးများကိုစုတ်ယူပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေပါတယ်။
photo credit to @aryannailliano
– ပင်လယ်ရေကူးမယ်၊ ပင်လယ်ရေနဲ့ထိတွေ့မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်မှာတော့နာတာရှည်အဆစ်အမြစ်ယောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အဆစ်ရောဂါများကိုသက်သာစေနိုင်ခြင်းအပြင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ Depression တွေ စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ ပင်လယ်ရေအေးကြောင့် စိတ်အာရုံကိုလည်း စုစည်းမိစေပြီး အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ တွေကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာမို့ တရားထိုင်ခြင်းသဘောတရားနဲ့လည်းတူပါသေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုလည်းခံစားရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Muscle နာကျင်မှုများကိုလည်းသက်သာစေပြီး ကောင်းစွာအိပ်ပျော်စေပါတယ်။
-ဆားပါဝင်မှုများတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပြသနာတွေဖြစ်တဲ့ နှာပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း စတဲ့ပြသနာတွေကို သဘာဝနည်းအတိုင်းကုသသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
-ပင်လယ်ရေကူးခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း Temperature မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကိုလျင်မြန်စွာ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး ဝိတ်ကျစေနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပင်လယ်ဘက်ကိုခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုဗဟုသုတလေးတွေကိုသိထားတော့ ပိုပျော်စရာကောင်းပြီး အကျိုးရှိနိုင်တာမို့ ပြန်လည် Share ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်.. ပင်လယ်ကြီးကို တအားလွမ်းနေကြပါပြီ။
← Things to do in Thandwe သို့မဟုတ် သံတွဲသို့သွားလည်ခြင်း အနုပညာ
Why you should go onaStaycation now? →